ဘှဲ့ရပွီးနောကျပိုငျးဘဝတဈခုကို ဘယျလိုဖွတျသနျးမလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Education/ဘှဲ့ရပွီးနောကျပိုငျးဘဝတဈခုကို ဘယျလိုဖွတျသနျးမလဲ ? ? ?
ဘှဲ့ရပွီးနောကျပိုငျးဘဝတဈခုကို ဘယျလိုဖွတျသနျးမလဲ ? ? ?
So Shwe February 18, 2022	Education Leaveacomment
ကြောငျးသားထကျဝကျခနျ့သညျ တက်ကသိုလျမှဘှဲ့ရပွီးနောကျပိုငျး စိတျကရြောဂါနဲ့ ရငျဆိုငျရလရှေိ့သညျဟု လလေ့ာဆနျးစဈမှုမြားကဆိုကွပါတယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ပတျသကျသညျ့ ပညာရှငျတဈဦးဖွဈသူ Stephen Buckley က “သူတို့ရဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ပတျသကျပွီး အခကျအခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရတာက အကွောငျးပွခကျြအမြားကွီး ရှိနိုငျပါတယျ။ ပညာရေးပွီးဆုံးပွီးနောကျပိုငျး ဘဝက စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးသလို စိတျရှုပျစရာလညျးကောငျးပါတယျ။” ဟု ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြားအနဖွေငျ့ ဘှဲ့ရပွီးနောကျပိုငျး လြှောကျလှမျးရမညျ့ဘဝ၌ ပိုမိုလှယျကူစရေနျအတှကျ တက်ကသိုလျကြောငျးသားဘဝနောကျဆုံးနှဈ၌ပငျ ပွုလုပျနိုငျသညျ့ အဆငျ့မြားလညျးရှိပါတယျ။
၁။ အခွားသူမြားနဲ့ နှိုငျးယှဉျခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ။
“တက်ကသိုလျတကျပွီးသှားရငျ ဘာဆကျလုပျရမလဲမသိတာက ပုံမှနျကိစ်စပါပဲ။ လူတျောတျောမြားမြားက သူတို့ရဲ့ နောကျထပျခွလှေမျးတှကေို လှမျးနိုငျဖို့အတှကျ လပေါငျးမြားစှာ၊ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာအောငျ အခြိနျယူရတာကို သတိရဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။” ဟု Buckley က ဆိုထားပါတယျ။ မကွာခငျကမှ ဘှဲ့ရရှိခဲ့သညျ့ Rosie Chalk က “ရှငျတို့ရဲ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ရှငျနဲ့ မတူတော့ဘူးလို့ ခံစားရပမေယျ့ လကျတှမှေ့ာတော့ သူတို့လညျးရှငျ့လို တူညီတဲ့နရောမှာပဲရှိနတောပါ။ လူတခြို့က ကြောငျးပွီးတာနဲ့ အလုပျသငျ ဒါမှမဟုတျ အခြိနျပွညျ့အလုပျတှကေို ရသှားတာ မွငျရတာက ကြှနျမအတှကျ အခကျခဲဆုံးပါ။ ကြှနျမလညျး အဲ့ဒီလိုဖွဈဖို့ ဖိအားတှေ ခံစားခဲ့ရပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံမရှိတာ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကွံ့ခိုငျမှုမရှိတာနဲ့ ပိုကျဆံမရှိတာကွောငျ့ လနျဒနျလိုနရောကို သှားဖို့ မဖွဈနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒါကပွိုငျပှဲတဈခုမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျဘယျလိုခံစားနရေလဲဆိုတာနဲ့ပဲ သကျဆိုငျပါတယျ။” ဟု ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၂။ အနာဂတျအတှကျ ကွိုတငျအုတျမွဈခပြါ။
Carly- May ဟုချေါသညျ့ ကြောငျးသူတဈဦးက “ကြောငျးသားတှရေဲ့ စာနယျဇငျးပညာနဲ့ ရဒေီယိုဆိုငျရာပှဲတှကေို ကြှနျမသှားတကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စာနယျဇငျးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ရနျပုံငှကေိစ်စရပျတှအေတှကျလညျး ဘရိုကျတနျမွို့က NCTJ သငျတနျးကို တကျရောကျဖို့လညျး လြှောကျထားခဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုလုပျခဲ့တာက ကြှနျမ အလုပျရှာတဲ့အခြိနျမှာ အကြိုးပွုမယျဆိုတာသိခဲ့လို့ပါ။” ဟု ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျ၌ သူမသညျ The Mid Sussex Times ရဲ့ သတငျးထောကျတဈဦးအဖွဈလညျး ဆောငျရှကျနပွေီဖွဈပါတယျ။ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြားအနဖွေငျ့ တက်ကသိုလျမှဘှဲ့ရပွီးသညျနဲ့တဈပွိုငျနကျ အလုပျရရှိရနျမလှယျကူခွငျးကွောငျ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသားဘဝ နောကျဆုံးနှဈမှစတငျပွီး အလုပျနဲ့ပတျသကျသညျ့ အဆကျအသှယျမြားကို စတငျရှာဖှထေားရနျ လိုအပျပါတယျ။
၃။ ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျပါ။
ဘှဲ့ရပွီးနောကျပိုငျးဘဝက အထီးကနျြဆနျနိုငျပွီး Buckley ရဲ့ အဆိုအတိုငျး ကနျြးမာအောငျနထေိုငျရနျ အရေးကွီးပါတယျ။ Buckley က မြှတသညျ့အစားအသောကျကို စားသုံးပွီး ရမြေားမြားသောကျသုံးရနျ၊ အရကျသစောနဲ့ မူးယဈဆေးဝါးမြား မသုံးစှဲရနျ အကွံပေးထားပါတယျ။ ထိုအခြိနျသညျ မငွိမျမသကျမှုအမြားအပွားဖွဈနိုငျသညျ့ အခြိနျဖွဈခွငျးကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျရော၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာပါ ကနျြးမာနရေနျ လိုအပျပါတယျ။ မကွာခငျက ဘှဲ့ရခဲ့သညျ့ Lucy Wynne က လညျး ထိုအခြိနျ၌ အားကစားလုပျသငျ့ကွောငျး အကွံပေးပွောကွားထားပါသေးတယျ။
၄။ မိမိတကျခဲ့သညျ့ တက်ကသိုလျကို ပွနျလညျအကူအညီတောငျးပါ။
ဘှဲ့ရကြောငျးသားကြောငျးသူမြားအနဖွေငျ့ ဘှဲ့ရပွီးပွီးခငျြးအခြိနျကာလ၌ အထီးကနျြသညျဟု ခံစားရနိုငျသျောလညျး မိမိတကျခဲ့သညျ့ ကြောငျးမှတဈဆငျ့ အထောကျအပံ့အခြို့ ပွနျလညျရရှိနိုငျပါတယျ။ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈဦးက “ခငျဗြားတို့ရဲ့ ကြောငျးတှမှော ကြောငျးသားသမဂ်ဂနဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှကေို နှရောသီမှာ ဖှငျ့လှဈနိုငျဖို့ရှိပွီး အဲ့ဒီကနေ အလုပျအကိုငျရှာဖှရေေး ဝနျဆောငျမှုလိုမြိုး အကူအညီတှေ ရလာနိုငျပါတယျ။” ဟု ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ Buckley ကလညျး “တက်ကသိုလျက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အမွဲတမျး အဆကျအသှယျရှိအောငျနပေါ။ ဒီလိုအလှညျ့အပွောငျးကာလတှကေ လူတိုငျးကွုံတှရေ့နိုငျပွီး သူငယျခငျြးဟောငျးတဈယောကျဆီက အားပေးစကားကွားရတာက အားတကျစရာပါ။” ဟု အကွံပေးသှားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ဘွဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းဘဝတစ်ခုကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲ ? ? ?
ကျောင်းသားထက်ဝက်ခန့်သည် တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း စိတ်ကျရောဂါနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်ဟု လေ့လာဆန်းစစ်မှုများကဆိုကြပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်သည့် ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Stephen Buckley က “သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာက အကြောင်းပြချက်အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးပြီးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ဘဝက စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသလို စိတ်ရှုပ်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။” ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် ဘွဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း လျှောက်လှမ်းရမည့်ဘဝ၌ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝနောက်ဆုံးနှစ်၌ပင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် အဆင့်များလည်းရှိပါတယ်။
၁။ အခြားသူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
“တက္ကသိုလ်တက်ပြီးသွားရင် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိတာက ပုံမှန်ကိစ္စပါပဲ။ လူတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကို လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် လပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် အချိန်ယူရတာကို သတိရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။” ဟု Buckley က ဆိုထားပါတယ်။ မကြာခင်ကမှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည့် Rosie Chalk က “ရှင်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှင်နဲ့ မတူတော့ဘူးလို့ ခံစားရပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ သူတို့လည်းရှင့်လို တူညီတဲ့နေရာမှာပဲရှိနေတာပါ။ လူတချို့က ကျောင်းပြီးတာနဲ့ အလုပ်သင် ဒါမှမဟုတ် အချိန်ပြည့်အလုပ်တွေကို ရသွားတာ မြင်ရတာက ကျွန်မအတွက် အခက်ခဲဆုံးပါ။ ကျွန်မလည်း အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ ဖိအားတွေ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အတွေ့အကြုံမရှိတာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုမရှိတာနဲ့ ပိုက်ဆံမရှိတာကြောင့် လန်ဒန်လိုနေရာကို သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါကပြိုင်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂။ အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်အုတ်မြစ်ချပါ။
Carly- May ဟုခေါ်သည့် ကျောင်းသူတစ်ဦးက “ကျောင်းသားတွေရဲ့ စာနယ်ဇင်းပညာနဲ့ ရေဒီယိုဆိုင်ရာပွဲတွေကို ကျွန်မသွားတက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စာနယ်ဇင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရန်ပုံငွေကိစ္စရပ်တွေအတွက်လည်း ဘရိုက်တန်မြို့က NCTJ သင်တန်းကို တက်ရောက်ဖို့လည်း လျှောက်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာက ကျွန်မ အလုပ်ရှာတဲ့အချိန်မှာ အကျိုးပြုမယ်ဆိုတာသိခဲ့လို့ပါ။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်၌ သူမသည် The Mid Sussex Times ရဲ့ သတင်းထောက်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရပြီးသည်နဲ့တစ်ပြိုင်နက် အလုပ်ရရှိရန်မလွယ်ကူခြင်းကြောင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ နောက်ဆုံးနှစ်မှစတင်ပြီး အလုပ်နဲ့ပတ်သက်သည့် အဆက်အသွယ်များကို စတင်ရှာဖွေထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
၃။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။
ဘွဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းဘဝက အထီးကျန်ဆန်နိုင်ပြီး Buckley ရဲ့ အဆိုအတိုင်း ကျန်းမာအောင်နေထိုင်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။ Buckley က မျှတသည့်အစားအသောက်ကို စားသုံးပြီး ရေများများသောက်သုံးရန်၊ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးများ မသုံးစွဲရန် အကြံပေးထားပါတယ်။ ထိုအချိန်သည် မငြိမ်မသက်မှုအများအပြားဖြစ်နိုင်သည့် အချိန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ကျန်းမာနေရန် လိုအပ်ပါတယ်။ မကြာခင်က ဘွဲ့ရခဲ့သည့် Lucy Wynne က လည်း ထိုအချိန်၌ အားကစားလုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပေးပြောကြားထားပါသေးတယ်။
၄။ မိမိတက်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ကို ပြန်လည်အကူအညီတောင်းပါ။
ဘွဲ့ရကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် ဘွဲ့ရပြီးပြီးချင်းအချိန်ကာလ၌ အထီးကျန်သည်ဟု ခံစားရနိုင်သော်လည်း မိမိတက်ခဲ့သည့် ကျောင်းမှတစ်ဆင့် အထောက်အပံ့အချို့ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက “ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသားသမ​ဂ္ဂနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို နွေရာသီမှာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ရှိပြီး အဲ့ဒီကနေ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ဝန်ဆောင်မှုလိုမျိုး အကူအညီတွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Buckley ကလည်း “တက္ကသိုလ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲတမ်း အဆက်အသွယ်ရှိအောင်နေပါ။ ဒီလိုအလှည့်အပြောင်းကာလတွေက လူတိုင်းကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ယောက်ဆီက အားပေးစကားကြားရတာက အားတက်စရာပါ။” ဟု အကြံပေးသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Previous iPhone ထဲရဝေငျသှားခဲ့ရငျ ခလုတျတခကျြနှိပျရုံနဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျမယျ့နညျးလမျးကောငျး။
Next iPhone ကို မှနျမှနျကနျကနျနဲ့ အသုံးပွုနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကောငျးမြား။